Edhisheni nhau svondo rino (26 - 30 Gunyana) | Zvazvino Zvinyorwa
Lidia aguilera | | Zvinyorwa, dzakawanda
Mangwanani akanaka kune wese munhu! Kubva Zvazvino Zvinyorwa Tinoda kukupai imwe yenhau dzekunyora dzinozosvika muzvitoro zvemabhuku kuSpain svondo rino, kubva Muvhuro, Gunyana 26 kusvika Chishanu, Gunyana 30. Ndinovimba vamwe vacho vanowana kutarisisa kwako.
1 "A Contraluz" naRachel Cusk
2 Bruce Springsteen's "Akazvarwa Kumhanya"
3 "Normal person" naBenito Taibo
4 "Misodzi mugungwa" naRuta Sepetys
5 "Harry Potter neMwana Akatukwa" naJK Rowling
"A Contraluz" naRachel Cusk
Asteroid Mabhuku - Gunyana 26 - 224 mapeji
Mumwe munyori wechiChirungu anouya kuAthens muzhizha kuzodzidzisa makosi ekunyora. Munguva iyi, vanhu vaanosangana navo vanosarudza kumuvhurira vomuudza nezve zvakakosha zvikuru zvehupenyu hwavo. Pakati pavo pane rudo, zvishuwo uye kutya izvo zvinoudzwa kune murondedzero pane izvo zvishoma zvinozivikanwa nezvake, murondedzeri uyo muverengi anosvika pakuziva zvishoma nezvishoma kuburikidza nemanzwiro ake nepfungwa.
"Kurwisana nechiedza chaanotaura nesu nezvekuti tinovaka sei hunhu hwedu kubva kuhupenyu hwedu kubva kune hwevamwe"
Bruce Springsteen's "Akazvarwa Kumhanya"
Random House Literature - Gunyana 27 - 576 mapeji
Muna 2009, Bruce Springsteen uye E. Street Band vakaita panguva yekuzorora kweSupp Bowl. Chiitiko ichi chaive chakanakisa zvekuti Bruce akasarudza kunyora nezvazvo, ndokutanga izvi hupenyu hwake.
Mumakore manomwe apfuura, Bruce Springsteen akazvipira kunyora nyaya yehupenyu hwake, kusanganisira kuvimbika, kuseka uye mavambo enziyo dzake mumapeji aya. Mune ino biography iwe unogona kuwana ruzivo rwakawanda pamusoro pemunyori uye chiratidzo chake chenguva dzakakosha muhupenyu hwake, pamwe nekutsanangura kuti nei rwiyo rwekuti "Akazvarwa kumhanya" rinoburitsa zvakawanda kupfuura zvatinofunga.
“Kunyora nezvako chinhu chinonyanya kufarira. […] Asi muchirongwa chakaita seichi munyori anoita vimbiso: kuratidza pfungwa dzake kumuverengi. Uye ndizvo zvandakaedza kuita mumapeji aya "
"Normal person" naBenito Taibo
Edhisheni yekuenda - Gunyana 27 - 216 mapeji
Sebastián akararama hupenyu hwakajairika uye hunofadza, huzere nehope uye zvirongwa kusvikira vabereki vake vafa. Kubva ipapo akagara nababamunini vake Paco uye akararama zvinoshamisa zvisingaite sekusangana nemumwe wevampire vanogara muMexico City kana kupona pakurwiswa nechikara chikuru chegungwa. Nekudaro, zvakadii naSebastian? Izvi zviitiko hazvisi zvinoitika kune vanhuwo zvavo. Haasi iye "munhuwo zvake"?
"Misodzi mugungwa" naRuta Sepetys
Edhisheni Maeva - Gunyana 28 - 336 mapeji
Iye munyori we "Pakati pemumvuri wechena", Ruta Sepetys, adzoka aine nyowani nyowani inoita kunge inowana iwo akafanana akanaka ongororo seiya ataurwa pamusoro.
Kupfupisa nyaya yacho kunogona kuve nyore sezvo, mumashoko emunyori, uku ndiko kwaive mavambo enhoroondo yake yazvino:
"Imwe hama yababa vangu yanga yoda kukwira Wilhelm Gustloff ndokundikumbira kuti ndipe izwi kune avo vakafa vachitenda kuti nyaya dzavo dzanyura navo"
IWilhelm Gustloff inosanganisirwa nenjodzi huru yegungwa munhoroondo. Mukati mayo makafamba vanhu vanopfuura zviuru zvipfumbamwe avo vakapedzisira vave pakati pekukomberedzwa uko kumabvazuva kweEurope kwakaitwa mukati meHondo yechipiri yePasi rose. Munyaya iyi, munyori anopa izwi kune vechidiki vana vane nzira dzinoyambuka muchikepe ichi.
"Harry Potter neMwana Akatukwa" naJK Rowling
Edhisheni Salamandra - Gunyana 28 - 320 mapeji
Vazhinji venyu muchave muchiverenga mazuva ekuburitswa kwenyaya ichave yekupedzisira nyaya yaHarry Potter uye handifungi kuti Chitatu chino mamirioni avanhu vanobva kumativi ese eSpain vachange vachitsvaga bhuku iri muzvitoro zvemabhuku zveguta ravo.
Iri bhuku ndicho chinyorwa chemutambo une zita rimwe chete uye inotaurira nyaya yekuti Harry Potter akura riini, mushandi weBazi reMagineti, akaroora uye ane vana vatatu. Nekudaro, hupenyu hwake hahuzombodzikama uye ndezvekuti izvozvi nezvakaitika kare vafunga kubatana uye Harry Potter anofanirwa kusangana nemwanakomana wake mudiki chokwadi chisina kugadzikana: dzimwe nguva, rima rinomuka kubva kunzvimbo dzisingatarisirwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Edhisheni nhau svondo rino (Gunyana 26 - 30)
Novel inokunda yeInternational Narrative Contest "Yemuenzaniso Novels" yatove kutengeswa. Iri bhuku rinonzi "Anatomy yeFish Man" uye rakaburitswa neVerbum imba yekutsikisa. Ndinokurudzira kuverenga kwako.
Chii chinonzi kubatidza mabhuku?